Hiran State - News: Xaalada guud ee Hiiraan iyo heerka abaabulka dagaalka ay wadaan ciidamada xoogaga reer Hiiraan.
Xaalada guud ee Hiiraan iyo heerka abaabulka dagaalka ay wadaan ciidamada xoogaga reer Hiiraan.
Hiiraan:- Kedib dagaalo kala duwan oo labadii maalmood ee inadhaaftay ka socday dhulka fog ee miyiga ah iyo nawaaxiga magaalada Belet Weyn ayaa ugu danbeyn halkaasi ka soo gaaray jabweyn kooxda Shabaab oo hada leyskugu geeyey meelo cayiman.
Awooda ciidamda hada dagaalka wado ee loogu yeero ciidamada xoogaga reer Hiiraan ayaa timid kedib markii ay dhawaantaan gudaha Hiiraan gaareen xildhibaano uu hogaaminayey Xildhibaan Waare iyagoo ku guuleystay in maadama ay ciidamdu awoodi waayeen iyagoo kala socda oo magacyo kala duwan wata aysan qabsan karin magaalooyinka Hiiraan oo ay taasi horey ugu fashilmeen sidaasi daraadeedna waxey ciidamadu isku raaceen iney qaataan taladii ay mudanayaasha soo jeediyeen iyagoo ku dagaal galayo magaca guud ee xoogaga reer Hiiraan.
Dhalinyarada dagaalka ku jiro ayaa 90% la dhacay fikirkii ay halkaasi la tageen mudanayaasha aadna ugu amaanay meesha dhaw ee ay wax ka tusiyeen taasi oo soo gaabineysa iney markasta dagaal joogto ah iska wadaan iyagoo magacyo ay sameysteen shaqsiyaad guul ku geeni waayey.
Ciidamada xoogaga reer Hiiraan oo ay hada sida muuqata waxkasta u dhan yahiin ayaa sida warar horudhac ah lagu helayo xoogooda iskugu geeyey magaalada Bulo Burte oo laga yaabo iney dagaalo culus ka dhacaan maalmaha soo socda.
Dhinaca jaaliyada reer Hiiraan ee qurbaha oo horey u diiday iney gurmad la gaaraan ciidamadii horey ugu dagaalami jirtay halkaasi maadama ay ku dagaal gali jireen magac xisbi amaba koox ayaa hada wada abaabul ay ciidamda xoogaga Hiiraan ku caawinayaan maadama ay hada ciidanku ku mideysan yahay xoreynta Hiiraan oo dhan.
Marka laga soo tago sheegashada ay dowlada federalka iyo shaqsiyaad ku hadlayo magac kooxeed laga soo tago xaqiiqada Hiiraan ka jirto waa in ciidamadu ku dagaal galayaan xoogaga reer Hiiraan marka Hiiraan gacanta lagu dhigana shacabka ayaa xaqiiqda iyo halka uu u jiheysan yahay mustaqbalka reer hiiraan arki doona.
Sidoo kale waxaa ciidamada loo diyaariyey xarumo amaba Teendhooyin kumeel gaar ah si loogu daaweeyo dhaawaca. guud ahaan muraalka ciidanka waxii ka danbeeyey tagitaankii ay halkaasi gaareen xildhibaanadu wax weyn ayaa iska bedelay qaabka ay u shaqeeyaan ciidamada. sidoo kale waxaa lagu guuleystay in horjoogayasha ciidamada qaarkood oo shacabka jahwareerin jiray laga saxiixo ineysan ku dhiiran wax aysan shacabku rabin iney sameeyaan amaba ku dhiiradaan.
· admin on June 17 2011 13:52:30 · 0 Comments · 1912 Reads ·
14,612,832 unique visits